Soo dejisan Panda Dome Essential 20.00.00 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesPanda Dome Essential
Bogga rasmiga ah: Panda Dome Essential
Panda Dome Essential – abaalmarin ku guuleysta barnaamijka antivirus si loo ilaaliyo kombiyuutarada noocyada kala duwan. Antivirus waxay la timaadaa noocyo badan oo baaritaan ah si loo ogaado fayrasyada iyo nacfiyada, iyo dab-damis la dhisay ayaa ka hortagaya isku daygooda ee scammers inay xadaan xogta gaarka ah. Panda Dome Essential waxay bixisaa shabakada internetka oo ammaan ah iyadoo si toos ah looga horjoogsado boggaga phishing iyo bogagga qareemaya sida websiteyada dhabta ah. Kumbuyuutarka ayaa kormeeraya oo ka xayuubiya nidaamyada khatarta ah, waxay ka hortagaan falalka shaki ku jiro waxayna difaacaan hanjabaadaha laga helo qalabka USB-ga. Panda Dome Caqabada aasaasiga ah ee la xidhiidha shabakadaha wireless-ka oo ka waramaya isku xirnaanta shabakadaha WiFi oo leh heer ammaan hooseeya, taas oo yaraynaysa suurtagalnimada in lagu xiro jiheeyayaasha jabhada. Barnaamijka waxaa kale oo uu leeyahay module VPN ah oo aan la aqoonsaneyn oo internetka ah waxaana laga dhaafaa xayiraadaha gobollada iyagoo booqanaya khayraadka webka ee la xiray.
Ka ilaalinta fayraska, khayaanada iyo ransomware
Raadinta shabakada amaanka iyo isku xirka Wi-Fi
Xannibaadda nidaamyada taariikhda shakiga leh
Ku-dhisan gudaha VPN
Soo dejisan Panda Dome Essential
Faallo ku saabsan Panda Dome Essential
Panda Dome Essential Xirfadaha la xiriira